13 sano kadib Soomaali garsoori doonta FIFA - CIYAARO.COM
Home / News / Somalia / 13 sano kadib Soomaali garsoori doonta FIFA	13 sano kadib Soomaali garsoori doonta FIFA
By Gamadiid Guurre	Updated: September 13, 2015	Tweet
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, ayaa hambalyo u diray guddiga garsoorka, kaddib markii ay muujiyeen shaqo wanaagsan dalka iyo dibad ah, waxana ay dhawaan garsoori doonaan cayaaraha isreebreebka koobka adduunka ee 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka.
Guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta Cabdiqani Saciid Carab, ayaa gaarsiiyay dhambaal niyad dhis ah garsoorayaasha kubbadda cagta Soomaaliya, kuwaas oo isagu jiro qeyb kala duwan.
“Ka xiriir ahaan waxaan farxad la qeybsaneynaa garsoorayaasha kubbadda cagta oo muujiyay dadaal aad u sarreyo iyo dulqaad ay kusoo gaareen meesha ay manta taagan yihiin, waxaan kale oo mahadcelin u jeedinayaa xiriirka kubbadda cagta adduunka ee FIFA, oo muddo seddex iyo toban sanno kaddib noogu yeeray inaan dhexdhexaadino cayaaraha waa weyn ay qabtaan, waxaana ku rajo weeynahay in howshooda ay sii wanaagsanaato oo ay kasoo muuqdaan koobka adduunka ee la qaban doono 2018-ka.”
Guddoomiye Cabdiqani ayaa sidaasi ku yiri warsaxaafadeedka.
Kulan ciyaareedka ay dhexdhexaadin doonaan garsoorayaasha ayaa waxa uu dhexmari doonaa Tanzania iyo Malawi, lugta hore ee kulanka ayaa waxa ay ka dhici doontaa dalka Tanzania, 7-da bisha October ee isla sannadkan.
Garsoorayaasha qaban doono ayaa waxa ay kala yihiin:- Xasan Aadan Xaaji Yabarroow, Xamza Xaaji Cabdi, Saalax Cumar Abuukar iyo Bashiir Colaad Carab, waxana tani ay guul u tahay dhamaan bahda cayaaraha.
Ciyaaro noocan oo kale ah Soomaaliya inay qabato waxaa ugu dambeysay sannadii 2002, oo haatan laga joogo seddex iyo toban sanno, garsoorayaasha Soomaaliyeed ayaa xilligaa waxa ay dhexdhexaadiyeen kulan u dhaxeeyay Eretria iyo Suudaan, waxana ay kala ahaayeen dadka kulankaasi qabtay Cabdi Cabdulle Axmed (Basaalle), Bashiir Shire Xeydar (Bootaan), Cusmaan Cabdi Cusmaan iyo Axmed Xuseen Cumar (Axmed Keey)
Related posts:Jubbada hoose oo ka taqalustay GalgaduudTartan kubadda cagta ah oo ka soconaya garoonka Xararyaale ee degmada WardhiigleyQurbajoogta J/hoose oo soo dhaweeyay gudoomiyahooda Share/Bookmark	newSomalia